i-Maritzburg ayikaphumi engozini | Scrolla Izindaba
i-Maritzburg ayikaphumi engozini
Umdlali wasesiswini weMaritzburg United, uDaylon Claasen ukholelwa ekutheni, yize benqobile phakathi nesonto, impi yabo yokusuka ezansi ku-log isekude ukuphela.
Ekhuluma ngaphambi kohambo lwabo oluya e-Bloemfontein Celtic ezinkundleni zemidlalo iDr Petrus Molemela emdlalweni we-DStv Premier League ngoMgqibelo ebusuku, uClaasen uthe ukunqoba ngelilodwa eqandeni ngesikhathi bebhekene neBlack Leopards, kuthuthukise isimo ekhempini.
“Izinga lokuziphatha nokuzethemba likhuphuke kancane. Kube ukunqoba kwamaphuzu amathathu kithina kodwa akusikho ukuphela kwempi,” kusho yena.
“Isayinde indlela okumele siyihambe. Siyazi ukuthi kufanele sizimisele kuyo yonke imidlalo futhi kufanele siphathe yonke imidlalo njengeyamanqamu.”
IMaritzburg United, esendaweni ye-15 ku-log, ilandela iCeltic esendaweni ye-11 ngamaphuzu ayisithupha.
“Kumele sigxile futhi siqinisekise ukuthi siyalwenza uhlelo lomdlalo lwabaqeqeshi. Konke ukunqoba kubalulekile. Sifuna amaphuzu ngaphezu kwanoma yini enye,” kusho uClaasen.
ISupersport United ephezulu kwitafula le-log izokwamukela iTS Galaxy ehlule iSwallows FC okungukuhlulwa kwabo kokuqala kule sizini.
ISupersport United isendaweni yesibili ku-log, isele ngamaphuzu amathathu kubaholi be-log iMamelodi Sundowns.
AmaRocket asenze okungaphezu kwesisindo sawo selokhu u-Owen Da Gama ethathe izintambo kuleli qembu laseMpumalanga.
I-Galaxy isendaweni yesi-8 etafuleni.
I-Orlando Pirates, esendaweni yesithathu ku-log izoya enkundleni yezemidlalo iNelson Mandela ukuyobhekana neChippa United.
IChilli Boys idonsa kanzima endaweni ye-12 ku-log, ngokuqhelelena ngamaphuzu amane neBlack Leopards esezansi.